500; Internal Server Error - MYSTERY ZILLION
500; Internal Server Error
API လှမ်းခေါ်ရင် တခါတခါ 500 တတ်လာတယ်။ တခါပေါင်္ပြီဆိုလဲ ၂ နာရီ ၃ နာရီလောက်ကြာတယ်။ ပြီးတော့ ပြန်ရသွားကော။ တဖြေးဖြေးနဲ 500 တတ်တာ အကြိမ်စိတ်လာတယ်။ local လဲတူတူပဲ online ပေါင်္တင်လဲ အဲ့လိုပဲ။ အဖြေရှာကြည့်တာလဲ မရဘူး။ Version နိမ့်နေလို့လားမသိဘူး။ သုံးထားတာတွေကတော့ MVC (2010) / Microsoft Access (1997)
server log ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ API က ဘာ server ကို ဘယ် OS မှာ သုံးထားလဲ ? linux မှာ ဆိုရင် /var/log/apache သို့မဟုတ် /var/log/httpd မှာ error log ဖတ်လို့ရပါတယ်။ 500 က internal server error ပါ။ code level မှာ တစ်ခုခု မှားနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ error log ဖတ်ကြည့်မှ ဘာ ပြဿနာ တတ်လဲ သိနိုင်မယ်။
saturngod Windows7မှာသုံးထားတာပါ...
ရေးထားတဲ့ code တွေထဲက query တွေကို ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။ အကယ်လို့ API request တစ်ခုက သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထက် ကျော်လွန်သွားရင် request timeout ဖြစ်ပြီး internal server error တတ်လေ့ရှိပါတယ်။ 500 Error က server ကနေ ဘာဖြစ်မှန်းသေချာမသိရင် ပြန်ပေးလေ့ရှိတဲ့ default error code ပါ။ အဲ့ဒီ API ကို နောက်တစ်ခေါက်ရသွားရင် response time ဘယ်လောက်ကြာသလဲလို့ သတိထားစစ်ကြည့်ပါ။ ပုံမှန် API တစ်ခုအနေနဲ့ millisecond အနည်းငယ်သာ ကြာသင့်ပါတယ်။
သူဘာသုံးထားလဲ အရင်မေးကြပါဦး MVC (2010) / Access(1997) တဲ့ Windows ဖြစ်ဖို့များတယ် /var/log/.... တွေ သူရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး :3
Scorpions ဘာ server သုံးထားလဲခင်ဗျ ? IIS လား apache ?
saturngod IIS ပါ။ log က Event တွေပဲပေါ်နေတာ ဘယ် browser ကခေါ်လဲ ဘယ်ဖုန်းကခေါ်လဲ getMenu() တို့ getUser() တို့ အဲ့ဟာတွေပဲပြနေတယ်။
IIS ဆိုရင် log ပြဖို့ config လိုပါတယ်။